4.6.20 MCS COVID-19 အသစ်ပြောင်းခြင်း – Mason ဆိုကျောင်းများ COVID-19 ဌာနချုပ်
4.6.20 MCS COVID-19 အသစ်ပြောင်းခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့ခဏတာယူပြီးဤ COVID-19 ဖြစ်ရပ်သည်ယခုအချိန်တွင်မည်မျှခက်ခဲကြောင်းအသိအမှတ်ပြုချင်ပါသည်. There arealot of unknowns, and every day brings new information.
စောင့်ကြည့် ဒီဗီဒီယို of our staff and families sharing that while we may not be together physically, we are still in this together. And we are still Mason.
As of today at 2pm, Mason City ကျောင်းများတွင် COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုအားအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါ, နှင့် 4,450 အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်အတွက်အတည်ပြုဖြစ်ပွားမှု. အောက်ပါတို့မှာကျွန်ုပ်တို့၏မိသားစုများနှင့်ပြည်သူလူထု၏ဘုံမေးခွန်းများကိုတုံ့ပြန်မှုများဖြစ်သည်။
Mason City Schools takes the safety and privacy of our staff and students seriously. Lately, numerous Zoom meetings have been hijacked by inappropriate content. We’ve chosen not to use Zoom with our students. ဆရာများသည်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုမှတဆင့်ဆက်သွယ်နိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းများပေးလိမ့်မည် (ဥပမာ, through Google Meet) ဒါပေမဲ့သူတို့မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်. ဆရာများအနေဖြင့်လည်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဗီဒီယိုအခြေခံသည့်နည်းပညာများကိုသုံးနိုင်သည်, such as FlipGrid and SeeSaw, ကျောင်းသားများနှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်. Our staff and students use Google onadaily basis, and during this period of time we’re leaning heavily on frequently used tools and software versus adding new tools. We know there’s no perfect tool for video conferencing, and as adults we have strong preferences.
Takeout Blitz ကိုစားရန်နှင့်စားသောက်ဆိုင်မည်မျှစားသောက်နိုင်သည်ကိုကုန်သည်ကြီးများအသင်းကပြုလုပ်သည့်အရာများတွင်ပါ ၀ င်ပါ. ဖြည့်စွက်ကာ, ယောရှုနေရာမှလှူဒါန်းပါ “ Comet Carryout” ကိုရွေးချယ်ပြီးသင်လိုအပ်သောမိသားစုအားကျွန်ုပ်တို့၏ဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှအစားအစာဖြင့်ကောင်းချီးပေးပါလိမ့်မည်.